I-JacuzziRoom.Add $ 30ppHotpool,i-Sauna, isidlo sasekuseni & isidlo sasekuseni - I-Airbnb
I-JacuzziRoom.Add $ 30ppHotpool,i-Sauna, isidlo sasekuseni & isidlo sasekuseni
Heredia Province, i-Costa Rica
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Gabriela
Yindlu enhle etholakala enhliziyweni yentaba, imizuzu embalwa ukusuka esikhumulweni sezindiza. Ungathola ipharadesi lokuphumula elizungezwe imvelo, ukuthula nokuthula. Indlu yonke yayiklanyelwe ukunethezeka okukhulu nokuphumula kwezivakashi zayo. Amapulangwe amahle aphelile, imibhede evulekile enegwebu lenkumbulo, wonke ukotini ongu-100%, izihlambi ze-hydro-massage, ama-gel okugeza nama-shampoos enzelwe izivakashi ngokukhethekile. Ungakwazi ukujabulela konke ukuphumula kwe-Spa, ngesinyathelo esisodwa.
Leli kamelo linohlobo lweNdlovukazi (Umbhede Olala Abantu Ababili),kanye nendlu eyakhiwe ngamapulangwe, elungele abantu abangu-6. Inegumbi lokugezela langasese, i-jacuzzi, i-shower yokubhucunga umzimba futhi iyakwazi ukungena kuvulande. Le ndawo yokuhlala ivulekile, isondelene futhi ayijwayelekile, inamanothi angokwemvelo, ukunethezeka nobuhle. Ngesevisi engokwezifiso zakho nokunaka, kunobumfihlo obukhulu endaweni ethulile ezintabeni. Itholakala e-San José de Montaña, indawo yayo ekhethekile izokuvumela ukuthi ujabulele imvelo futhi ube imizuzu embalwa ukusuka esikhumulweni sezindiza, kanye nedolobha. Isimo sezulu sayo esipholile silungele ukuphumula, sinamasevisi ahambisana nezindawo ezizungezile.
Kule ndawo yamaphupho singaphumula kuphela; Ungathola futhi isevisi yethu ekhethekile ye-Spa, lapho sinikeza khona ukwelashwa okungokwemvelo nokujabulisayo, lapho ochwepheshe bethu abangochwepheshe bezokwenza uzizwe usezulwini. Sine-sauna, i-Inclusive, amasu ahlukahlukene okuzindla, ukuphumula kanye nokwelapha okuhlukile okuzokuvumela ukuba uphume ekucindezelweni kwansuku zonke.
4.60 · 84 okushiwo abanye
Umakhelwane uthule kakhulu, yindawo yezintaba. Sisodwa emizuzwini engama-41 kuphela yokusebenza, imizuzu engama-20 ukusuka edolobheni laseHeredia nemizuzu engama-40 ukusuka edolobheni laseSan José.
Nginikeza izivakashi zami ukuzimela, kodwa ngiyatholakala uma zingidinga